मान्छे बायाँ हाते कसरी हुन्छन् ? वैज्ञानिकले फेला पारे यस्तो रहस्य « Deshko News
मान्छे बायाँ हाते कसरी हुन्छन् ? वैज्ञानिकले फेला पारे यस्तो रहस्य
मान्छे बाँया हाते हुनुको रहस्य वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका छन् । वैज्ञानिकहरूले कुनै मानिस बायाँ हाते हुनुमा डीएनएमा हुने आनुवंशिक संरचनाको भूमिका भएको प्रमाण पहिलो चोटि फेला पारेका छन्।
उनीहरुकाअनुसार मस्तिष्कको संरचना एवम् त्यसको काम गर्ने प्रणाली त्यसमा पनि विशेषतः भाषिक सीपमा त्यो आनुवंशिक निर्देशक प्रणालीको प्रभावशाली संलग्नता देखिन्छ। अक्सफर्ड विश्वविद्यालयक शोधकर्ताहरूका अनुसार परिमाणस्वरूप बायाँ हाते मानिसमा वाक्कौशल हुन सक्ने बताएका छन्।
तर मस्तिष्कको विकास र दायाँ वा बायाँ हाते हुनुबीचको सम्बन्धबारे विविध रहस्य यथावत् नै छन्। अनुसन्धानअनुसार दशजना मानिसमध्ये औसत एकजना बायाँ हाते हुन्छन्। जुम्ल्याहा मानिसमा गरिएका शोधहरूले आमाबुवाबाट आएको वंशाणु डीएनएले त्यसमा भूमिका निर्वाह गरेको देखाइसकेको छ।
शोधकर्ताहरूको टोलीले चार लाख मानिसको डीएनए संरचनाको पूर्ण विवरण भएको यूके बायोब्याङ्कमा अध्ययनक गरेको थियो। त्यहाँ विविररण राखिएका चार लाख मानिसमध्ये ३८ हजार मात्र बायाँ हाते छन्। वैज्ञानिकहरूले मानिसलाई बायाँ हाते बनाउन भूमिका भएका डीएनएका खण्डहरू पत्ता अथक प्रयास गरे।
ब्रेन जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनले त्यस्ता चारवटा विशेष खण्ड फेला परेको देखाएको छ। एक शोधकर्ता प्राध्यापक ग्वेनाइल डउडकाअनुसार अध्ययनले कुनै व्यक्ति बायाँ हाते वा दायाँ हाते हुने कुरा उसको आनुवंशिक पक्षसँग सम्बन्धित रहेको पहिलो पटक देखाएको बताइन् ।
यूके बायोब्याङ्क परियोजनामा सहभागीहरूको परीक्षण गर्दा साइटोस्केलेटनले मस्तिष्कको ह्वाइट म्याटर भनिने विशेष क्षेत्रको संरचनामा परिवर्तन गरिरहेको देखिएको छ। प्राध्यापक डउडले भनिन्, ‘मानिसमा हातको चालसँग जोडिएको साइटोस्केलेटनसम्बन्धी विविधता मस्तिष्कमा स्पष्ट रूपमा देखिने कुरा हामीले पहिलो पटक प्रमाणित गरेका छौँ। ’
बायाँ हाते मानिसहरूमा मस्तिष्कका दायाँ र बायाँ दुवै भाग भाषिक ज्ञानको अङ्गसँग सम्बन्धित भएका र बढी समन्वयमा रहेका हुन्छन्। अध्ययनले बायाँ हाते मानिसमा मस्तिष्कका कोशिकासँग सम्बन्धित पार्किन्सन्स रोगको न्यून र स्किट्सफ्रेनिअको उच्च जोखिम रहने देखाएको छ।
बाँया हातको प्रभाव ?
बायाँ हाते भएका व्यक्तिले प्रायस् अनुचित व्यवहारको सामना गर्नुपर्छ। हातका शल्यचिकित्सक तथा शोधका लेखक प्राध्यापक डोमिनिक फर्निस भन्छन्, ‘कैयौँ संस्कृतिमा बायाँ हाते व्यक्तिलाई अशुभ वा दुष्टको रूपमा पनि लिइन्छ। अनि त्यो मानिसको बोलीचालीमा पनि झल्किन्छ।’
दायाँ वा बायाँ हाते हुनुमा २५ प्रतिशत आनुवंशिक र ७५ प्रतिशत वंशाणुगत गुणबाहेक अन्य बाह्य कारणको भूमिका भएको अध्ययनको ठम्याइ छ।